GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba
Chineke nwere naanị otu aha. Otú e si ede ya n’asụsụ Hibru bụ יהוה ma a na-akpọ ya “Jehova” n’asụsụ Igbo. * Chineke si n’ọnụ onye amụma ya bụ́ Aịzaya kwuo, sị: “Abụ m Jehova. Ọ bụ ya bụ aha m.” (Aịzaya 42:8) Aha ahụ bụ́ Jehova gbara ihe dị ka ugboro puku asaa na Baịbụl ndị e ji aka dee n’oge ochie. Ọ karịrị ugboro ole aha ndị ọzọ a na-etu ya gbara na Baịbụl, karịakwa ugboro ole aha onye ọ bụla ọzọ gbara na Baịbụl. *
Chineke ò nwere aha ndị ọzọ?
Ọ bụ eziokwu na Baịbụl kwuru na Chineke nwere naanị otu aha, ma e nwere ọtụtụ aha a na-etu ya. Ka anyị leba anya n’ụfọdụ aha ndị e turu Chineke na ihe nke ọ bụla n’ime ha na-akụziri anyị gbasara ya.
Ebe ọ dị na Baịbụl
(E nweghị ebe o dị na Baịbụl)
E si n’asụsụ Arabik nweta ya. “Allah” abụghị ezigbo aha Chineke, kama ọ bụ utu aha ya nke pụtara “Chineke.” Ndị sụgharịrị Baịbụl n’asụsụ Arabik nakwa n’asụsụ ndị ọzọ ji “Allah” dochie anya “Chineke” n’ebe ndị ọ gbara na Baịbụl ha.
O nwere ike na-enweghị atụ. Okwu Hibru bụ́ ʼEl Shad·daiʹ, ma ọ bụ “Chineke bụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,” gbara ugboro asaa na Baịbụl.
Mkpughe 1:8; 21:6; 22:13
“Onye mbụ na onye ikpeazụ,” ma ọ bụ “mmalite na ọgwụgwụ,” pụtara na e nweghị Chineke bụ́ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ọzọ bu Jehova ụzọ, e nweghịkwa Chi ọzọ ga-esochi ya. (Aịzaya 43:10) Alfa na Omega bụ mkpụrụ akwụkwọ mbụ na mkpụrụ akwụkwọ ikpeazụ n’asụsụ Grik.
Onye Ochie Ahụ
O nweghị mmalite; ọ dị adị site n’ebighị ebi ruo n’ebighị ebi, tupu onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla amalite ịdị.​—Abụ Ọma 90:2.
Onye Kere Ihe Niile
Ọ bụ ya mere ka ihe niile malite ịdị.
Ọ bụ Onye na-enye ndụ.
Onye dị ike a na-efe ofufe. Okwu Hibru bụ́ ʼElo·himʹ na-egosi na Jehova dị ebube, dị ùgwù, o nweghịkwa o yiri.
Chi kasị chi niile
Ọ bụ Chi kasị elu ma e were ya tụnyere ‘chi ndị na-abaghị uru’ ụfọdụ ndị na-efe.​—Aịzaya 2:8.
Onye Ozizi Ukwu
Aịzaya 30:20, 21
Ọ na-akụzi ihe ndị bara ezigbo uru. Na-enyekwa ntụziaka.​—Aịzaya 48:17, 18.
Onye Ukwu kere ihe
Abụ Ọma 149:2
Ọ bụ ya mere ka ihe niile dịrị.​—Mkpughe 4:​11.
Chineke bụ́ onye obi ụtọ
1 Timoti 1:​11
Ọ bụ ọṅụ na obi ụtọ ka e ji mara ya.​—Abụ Ọma 104:31.
Onye na-anụ ekpere
Abụ Ọma 65:2
Ọ bụ ya na-anụ ekpere ọ bụla e ji okwukwe kpeere ya.
Abụ M Ihe M Bụ
Ọpụpụ 3:​14, Bible Nsọ nke Union Version
Ọ na-abụ ihe ọ bụla ọ chọrọ ịbụ iji mezuo nzube ya. Otú ọzọ e si sụgharịa okwu ahụ bụ “M Ga-abụ ihe ọ bụla dị m mma” ma ọ bụkwanụ “M Ga-abụ Ihe M Chọrọ Ịbụ.” (The Emphasised Bible, nke J. B. Rotherham sụgharịrị; Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ) Ihe a ga-enyere anyị aka ịghọta ihe aha Jehova e kwuru okwu ya n’amaokwu na-esonụ pụtara.​—Ọpụpụ 3:​15.
Diuterọnọmi 5:9, Bible Nsọ nke Union Version
Ọ naghị achọ ka a na-efe ya na chi ọzọ. Otú ọzọ e si sụgharịa ya bụ ‘Chineke nke anaghị ekwe ka ya na chi ọbụla ọzọ tụọ aka’ na “Chineke nke chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa.”​—Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik; Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ.
Eze mgbe ebighị ebi
Ihe niile e kere eke nọ n’okpuru, ha ga-anọkwa n’okpuru ya ruo mgbe ebighị ebi.
Abụ Ọma 135:5
Onye nwe ma ọ bụ nna ukwu; otú e si dee ya na Hibru bụ ʼA·dhohnʹ na ʼAdho·nimʹ.
Onye nwe ụsụụ niile nke ndị agha
Ndị Rom 9:​29, Bible Nsọ nke Union Version
Ọchịagha nke ìgwè ndi mmụọ ozi. Otú ọzọ e nwere ike isi sụgharịa utu ahụ bụ́ “Onye nwe ụsụụ niile nke ndị agha” bụ “Jehova nke ụsụụ ndị agha.”​—Ndị Rom 9:29, Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ.
Onye Kasị Elu
Abụ Ọma 47:2; Daniel 7:​18, 27
E nweghị onye ya na ya ha. Ọ bụ ya kacha ihe niile elu.
Onye Kasị Nsọ
Ọ dị nsọ, dịkwa ọcha karịa onye ọ bụla.
Onye kpụrụ anyị
Ọ ka onye ọ bụla na mba ọ bụla ike, otú ahụ onye na-akpụ ihe na-aka ájá o ji akpụ ihe ike.​—Ndị Rom 9:​20, 21.
Aịzaya 41:14; Bible Nsọ nke Union Version
Onye ji àjà Jizọs chụrụ napụta ma ọ bụ zụtaghachi anyị n’aka mmehie na ọnwụ.​—Jọn 3:​16.
Abụ Ọma 18:2, 46
Ebe dị elu e wusịrị ike na onye nzọpụta.
Ọ na-anapụta anyị n’ọdachi.
Onye Ọzụzụ Atụrụ
Abụ Ọma 23:1
Ọ na-elekọta ndị na-efe ya.
Ọkaakaa Onyenwe anyị
Ọ kacha ihe niile ike; Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ ʼAdho·naiʹ.
Aha ebe ụfọdụ n’Akwụkwọ Nsọ Hibru
Aha Chineke dị n’aha ebe ụfọdụ a kpọrọ aha na Baịbụl, ma ọ pụtaghị na aha ebe ndị a bụ aha ọzọ Chineke nwere.
Jenesis 22:13, 14
“Jehova Ga-egbo Mkpa.”
“Jehova Bụ Ebe Mgbaba M,” ma ọ bụ “ọkọlọtọ m.” (Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik) Jehova bụ onye ndị na-efe ya nwere ike ịgbakwuru, ya echebe ha ma nyere ha aka.​—Ọpụpụ 17:13-​16.
“Jehova Bụ Udo.”
Ihe mere anyị ji kwesị ịma aha Chineke ma na-akpọ ya aha ahụ
Ọ ga-abụrịrị na Chineke ejighị aha ya bụ́ Jehova egwu egwu mere o ji mee ka e dee ya ọtụtụ puku ugboro na Baịbụl.​—Malakaị 1:11.
Ọkpara Chineke bụ́ Jizọs, kwuru banyere aha Chineke ọtụtụ ugboro, si otú ahụ gosi na aha Chineke dị ezigbo mkpa. Dị ka ihe atụ, o kpeere Jehova ekpere, sị: “Ka e doo aha gị nsọ.”​—Matiu 6:9; Jọn 17:6.
Ọ bụ mmadụ ịmata aha Chineke ma na-akpọ ya aha ahụ bụ ụzọ mbụ onye ahụ ga-esi amalite ịbịaru Jehova nso. (Abụ Ọma 9:10; Malakaị 3:16) Onye ahụ bịaruo Chineke nso, ọ ga-eme ka nkwa a Chineke kwere mezuo n’ahụ́ ya. Ọ sịrị: “N’ihi na ọ hụrụ m n’anya nke ukwuu, m ga-emekwara ya ụzọ mgbapụ. M ga-echebe ya n’ihi na ọ matawo aha m.”—Abụ Ọma 91:14.
Baịbụl kwuru, sị: “E nwere ndị a na-akpọ ‘chi,’ ma ọ̀ bụ n’eluigwe ma ọ bụ n’ụwa, dị nnọọ ka e nwere ọtụtụ “chi” na ọtụtụ ‘ndị nwe mmadụ.’” (1 Ndị Kọrịnt 8:5, 6) Ma, o kwuru hoo haa na e nwere naanị otu ezi Chineke aha ya bụ Jehova.​—Abụ Ọma 83:18.
^ para. 3 Ọ bụ “Yahweh” ka ụfọdụ ndị ọkà mmụta asụsụ Hibru na-akacha ede ma ha dewe aha Chineke.
^ para. 3 Ndebiri aha Chineke bụ “Jaa.” Ọ gbara ihe dị ka ugboro iri ise na Baịbụl, ma a gụnye ebe ndị ọ gbara na “Haleluya,” ma ọ bụ “Aleluya,” bụ́ nke pụtara “Toonụ Jaa.”​—Mkpughe 19:1; Bible Nsọ nke Union Version; Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik.
Ọtụtụ ndị weere ya na Atọ n’Ime Otu bụ “ozizi dị mkpa n’okpukpe Ndị Kraịst.” Lee ihe Baịbụl kwuru.